तपाईंको मोबाइल फोन स्लो भयो ? ह्याक भएको हुनसक्छ | ictkhabar
Jul Sun 2021 01:18:54
मोबाइलको व्याट्री चाँडै सकिन्छ ? वा तपाईले प्रयोग गर्ने फोनमा उपलब्ध डेटा पनि सोही तरिकाले नै सकिने गरेको छ ? यस्ता खालका समस्याहरु पटक-पटक भोग्ने र व्योहोर्ने मानिसहरु धेरै नै छन् ।
तपाईंको मोबाइल फोनमा असाध्यै बढी मात्रामा डेटा खर्च भइरहेको छ भने पनि त्यो ह्याकिङको संकेत हुनसक्छ । अमेरिकी कम्प्युटर सेक्युरिटी कम्पनी नार्टनका अनुसार अत्याधिक मात्रामा डेटा खचए हुने कयांै कारण हुन सक्छन् । जस्तै एपको अधिक प्रयोग ।
नार्टनका अनुसार व्याट्री कति मात्रामा खर्च भइरहेको छ । यस बारेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । तपार्इंले आफनो फोन प्रयोग गर्ने तरिकामा कुनै परिसवर्तन गर्नुभएको छैन । तर पनि व्याट्री चाँडै डिस्चार्ज भइरहेको छ भने ठान्नुस् तपाईको फोन ह्याक भइसकेको छ ।
त्यसबाट भाइरसको पहिचान गर्न सकिन्छ । फोनको रिसेट गर्नु पनि अर्को उपाय हुन सक्छ । यस्तै, तपाईले राख्नु भएको सबै पासवर्ड समेत परिवर्तन गरिदिनुस् । फोनमा आक्रमण भएपछि पासवर्ड लिक हुने खतरा बढी हुने भएकाले त्यो जरुरी हुन्छ ।